Ulawula njani uxinzelelo usebenzisa ibhayibhile Discover ➡️ Discover online ▷ ➡️
Ulawula njani uxinzelelo usebenzisa ibhayibhile. Ixhala libonakala njenge ukuziva uloyiko kunye nokungazinzi kwiimeko ezahlukeneyo. Ke ngoko kubalulekile funda ukuyilawula ukuze ingakukhubazi okanye ikuthintele.
Ukulawula uxinzelelo kunokuba nzima. Nangona kunjalo, ungayenza ngoncedo lukaThixo. Inkqubo ye- IBhayibhile ibonisa indlela yokunciphisa ixhala ngoncedo lukaYesu. Akunyanzelekanga ukuba ujongane noxinzelelo lodwa. UThixo unawe.
Nazi ezinye zeengcebiso zokulawula uxinzelelo ngokweBhayibhile.
1 Ulawula njani uxinzelelo usebenzisa ibhayibhile
1.1 1. Funda oko kuthethwa yiBhayibhile
1.2 2. Nika uThixo ixhala lakho
1.3 3. Funa umbono omtsha
1.4 Sombulula ingxaki nganye nganye
1.5 5. Funa uncedo
1. Funda oko kuthethwa yiBhayibhile
Ibhayibhile ithetha ngoThixo uSomandla, okuthandayo kwaye olawula ubomi bakho. Ukuba unika ubomi bakho kuye, akufuneki ukuba woyike ikamva, kuba Uyakukhathalela. Njengoko ufunda iBhayibhile, uza kubona ukuba ungayenza njani UThixo ulungile, ulumkile, ulungile kwaye akaze asilele.
Sukuba nexhala lanto, ukuba izicelo zakho azaziwa phambi koThixo kuyo yonke imithandazo nesikhungo, unombulelo.
Lwaye uxolo lukaThixo, olugqithisele kuko konke ukuqonda, luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu.
KwabaseFilipi 4: 6-7
2. Nika uThixo ixhala lakho
Ukuxhalaba kufana nomthwalo onzima. Nika umthwalo kuThixo. Thetha ngoxinzelelo lwakho kwaye ubuze, "Thatha le nto, andinakuyiphatha ndedwa." Thembela kuThixo kwaye umvumele alawule ubomi bakho. Nanini na xa ukhathazeka kakhulu, mxelele uThixo kwaye umnike ixhala.
Lonke ixhala lenu liphoseni kuye, ngokuba yena enikhathalele.
eyesi-1 kaPetros 5:7
3. Funa umbono omtsha
Indlela elungileyo yokulawula unxunguphalo yile jonga imeko ngokwembono ebanzi. Ukuba umamkele uYesu njengomsindisi wakho, unezithembiso ezimbini ngekamva:
UYesu soze akushiye.
Yibani nemikhwa yenu ngaphandle kokunyoluka, yanelani koko ninako ngoku; ngokuba uthe, Andiyi kukushiya, andiyi kukushiya. Hebhere 13: 5
Uya kuya ezulwini, ebomini obungunaphakade.
Inene, inene, ndithi kuni, Lowo ulivayo ilizwi lam, akholwe ngulowo wandithumayo, unobomi obungunaphakade; kwaye ayisayi kuza ekugwetyweni, kodwa idlule ekufeni yangena ebomini. UYohane 5:24
Ezi zinto zimbini ziqinisekisiwe nokuba kwenzeka ntoni ebomini bakho. Nokuba kwenzeka ntoni, uThixo uya kukukhathalela. Kumaxesha anzima ebomini, ngamaxhala amaninzi, khumbula oku.
Ukuyibeka kwimeko ikwanceda ukulawula uxinzelelo lwezinto ezincinci. Ukufumana amanqaku asezantsi kuvavanyo okanye ukuphoswa yibhasi akuyi kutshabalalisa bonke ubomi bakho. Ukuxhalaba akuncedi ukusombulula iingxaki zobomi.
Nguwuphi na ke kuni onokuthi ongeze ikubhite kubude bexesha lakhe ngokubulaleka?
Kuba ukuba aninako nokuncipha, yini na ukuba nizixhalele ezinye?
ULuka 12: 25-26
Sombulula ingxaki nganye nganye
Ukuxhalaba kuhlala kubangelwa kukucinga ngeengxaki ezininzi ngexesha elinye. Xa oku kusenzeka, kufuneka ucwangcise izinto eziphambili ngokubaluleka. Iingxaki zomso akufanelekanga ukuba uzixhalabise ngazo. Jonga nje ekusombululeni iingxaki zangoku kwaye ushiye ikamva ezandleni zikaThixo. Sukuzama ukusombulula yonke into ngexesha elinye; sombulula ingxaki ibe nye ngexesha.
Musani ukuxhalela ingomso, kuba ingomso liya kuzisa ixhala lalo. Ububi bakhe banele yonke imihla.
5. Funa uncedo
AWUKHO wedwa. Ukulawula uxinzelelo akusoloko kulula, kodwa UThixo usebenzisa abanye abantu ukukunceda. Ukuba kunye nabantu abasele befundile ukujongana noxinzelelo kulungile ukubona indlela yokulawula ngendlela ebonakalayo. Ke funa uncedo lomfundisi othembekileyo okanye inkokeli ukukukhokela. Ukuba unxunguphalo lukubangela iingxaki zomzimba, khangela nonyango.
Ukuxhalaba entliziyweni yomntu kuyamthoba;
Kodwa ilizwi elilungileyo liyamvuyisa.
IMizekeliso 12: 25
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uyazi ulawula njani ixhala usebenzisa ibhayibhile. Khumbula ukuba uThixo unawe, kodwa akakulweli, ke ngoko, ukuzimisela kwakho ukutshintsha iimeko kubalulekile kule nkqubo.
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ngoku ufuna ukwazi Ithini ibhayibhile ngoxinzelelo, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.